Buugaag - Gargaarka Aafada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/Buugaag
Hada Ka Dib: Goormaanu arki karno mustaqbalka xagee ka bilaabeynaa?
Galabnimadii 11-kii Maarso, 2011, masiibo aad u weyn, aad u fara badan, oo aan la fahmi karin ayaa ku dhacday xeebta waqooyi-bari ee Japan. Nolosha kuwa gobolka waligeed isku mid ma noqonayso. Buugani wuxuu ku saabsan yahay baraaruga la socda musiibada. Ku saabsan daqiiqadaha iyo saacadaha iyo bilaha iyo sannadaha soo socda hadda kadib. Waxay ku saabsan tahay waxa dhacaya markaan garaacno madaxa madaxa oo aan indhaha kala qaadno, kana soo kacno riyadii aan ku noolaan jirnay maalmaheenna. Waxay ku saabsan tahay fursadaha had iyo jeer jira, badanaa aan la arki karin, si loo abuuro nolosha aan dooneyno, hadda.
Muuqaal qoto dheer oo lagu eegayo Puerto Rico wixii ka dambeeyay Hurricane Maria iyo xiisadda horudhaca ah ee xallisay musiibadaas taariikhiga ah.
Sadaqadu maahan hadiyad. Hadiyaynta waxay muujineysaa isu-celin, xiriir socda. Marka abaalmarintu aysan suurtagal ahayn, ficil bixinta ayaa ka baxsan isku xirnaanta labada dhinac iyo sadaqadu waxay noqotey mid kale oo muujinaysa qaabdhismeedka fasalka, ficil hal jid oo nadiif ah oo lagu taageerayo xaaladda hadda jirta.
Sheeko ku saabsan Talaabooyinka Dadka Madowga ah, Intii lagu gudajiray Musiibadii Dhimashada ee Philadelphia, Sannadkii, 1793
Sannadkii 1793 Philadelphia waxaa si ba'an u aafeeyay cudurka qandhada huruudda ah ee daran - in ka badan 100 qof ayaa dhimanaya maalin kasta. Caddaan ahaan tan cad tan iyo markii ay Afrikaan-Mareykanku u muuqdeen in badanaa aan qandho saameyn. Sababtaas awgeed Duqa magaalada Matthew Clarkson wuxuu ka codsaday Absalom Jones iyo Richard Allen inay abaabulaan bulshada Afrikaanka-Mareykanka ah si ay gacan uga geystaan ​​daryeelka kuwa aafoobay; lana aaso kuwii dhintay. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii uu yaraaday aafada, qaar ayaa ku eedeeyay bulshada Afrikaanka-Mareykanku inay bixiyaan xad dhaaf iyo xatooyo dadka ay daryeelayaan oo ay dhacayaan dadka dhintay. Richard Allen iyo lammaanihiisa, Absalom Jones waxay ku qoreen "Sheeko ku saabsan Talaabooyinka Dadka Madowga ah, Intii lagu gudajiray Musiibadii Dhimashada Ahaa ee ka dhacday Filadelfia, Sannadkii 1793: wax ka qabato dacwadaha lagu soo oogay beeshooda.
Janno lagu dhisay Naarta: Bulshooyinka aan caadiga ahayn ee Musiibada
Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ku saabsan musiibada, sida laga soo xigtay qoraaga abaalmarinta ku guuleysta Rebecca Solnit, ma ahan oo keliya in dad badan ay u yimaadaan munaasabadda, laakiin inay sidaa ku sameeyaan iyagoo faraxsan. Farxaddaas waxay muujineysaa baahi guud oo aan u habooneyn bulshada, ujeedo, iyo shaqo micno leh oo musiibo inta badan ay bixiso.
Taxane ah Un / Dabiici / Musiibo
Taxane ah Un / Dabiici / Musiibooyin ayaa sahamiya noocyada badan ee iscaawinta iyo suurto galka ee u muuqda xilliyada fashilka gobolka. Waxay haysaa isleegyo dhaadheer oo dhib badan, waxay naga kaxaynaysaa Katrina maxaabiista ku jirta Jasiiradda Riker markay sugayaan Duufaanta Sandy. Waxay fahamsan tahay una sharraxeysaa musiibada inay tahay nidaam wadareed, dawladduna ay tahay mid aan sugnayn, iyo bulshada oo labadaba aasaasi iyo lama huraan u ah.
Jaamacadda Gobolka Oregon Press
Xaqiijinta U adkaysiga Dhaladka Baasifigga Wadammada Asalka ah ee Wajaha Dhibaatada Cimilada
Umadaha asaliga ah ayaa safka hore kaga jira xiisadda cimilada ee hadda jirta. Iyada oo dhaqamada iyo dhaqaaluhu ka mid yihiin kuwa ugu nugul masiibooyinka la xiriira cimilada, Dadyowga Asaliga ah waxay soo saarayaan jawaabo la xiriirta isbeddelka cimilada oo tusaale u noqda bulshooyinka Dhaladka ah iyo kuwa aan u dhalan.
Tilmaamaha Steampunk ee apocalypse
Buug si buuxda loo sharraxay oo ah badbaadada steampunk oo daboolaya biyaha, cuntada, amniga, caafimaadka, goobta, iyo isgaarsiinta.
Buugaagta Haymarket: buugaagta loogu talagalay beddelka adduunka.
Calanka Madoow iyo Dabayl-dhaliyeyaasha: Rajada, Khilaafaadka, iyo Isku-imaatinka Dhul-Wadaagga, Daabacaaddii Labaad
Markii ay dhidibada u taagtay iyo dowladihiba New Orleans kadib Hurricane Katrina, waxaa la abuuray halyeeyga caanka ku ah 'Common Ground Collective' si uu u buuxiyo booska. Ujeeddada '' Midnimada Aan Sadaqada aheyn ', waxay kashaqeena ka abuureen quwad hoose - dhisida mashruucyo iskiis ah, barnaamijyo, iyo goobo isku filnaasho ah sida rugaha caafimaadka iyo isu imaatinka xaafadaha, iyagoo sidoo kale taageeraya bulshooyinka iska difaacaya maleeshiyaadka cadaanka iyo naxariis darada booliiska, duminta guryaha sharci darada ah, iyo ka saarida guriga.
Hantidhawrka Hawada Sare: Saameynta COVID-19 ee Shiinaha & Mareykanka
Bishii Janaayo 2020, Shiinaha waxay ka digtay hay'adaha waaweyn ee sayniska ee ku saabsan qarxinta fayras cusub oo khatar ah waxayna si aad ah u dhiirrigelisay taxaddarrada aasaasiga ah. Siyaasiyiinta Mareykanka iyo warbaahinta shirkadaha ayaa ku jees jeesay oo iska indho tiray digniinta.Washington waxay xoojisay siyaasadeeda dacaayadaha cunsuriyada, ku hareereynta militariga, dagaalka ganacsiga iyo cunaqabateynta.
Musiibada iyo Isbeddelka Bulshada: Ku saleysan Daraasadda cilmiga bulshada ee Musiibada Halifax
Daraasad indho indheyn ah oo ku saabsan saameynta bulshada ee uu sababay Musiibada Halifax iyo dadaallada gargaarka ee soo socda. Imtixaanku wuxuu la socdaa dhacdada nooca masiibada, iyada oo loo marayo kala-daadashada kala-dambaynta bulshada, oo ku dhammaata dib-u-dhiska bulshada wax ku oolka ah.
Guddiga raadinta iyo samatabbixinta
Raadinta iyo Samatabbixinta Dhacdada Musiibada ah: Addendum
Hawlaha samatabbixinta ee ballaaran waa kuwo isku dhafan, jahwareer leh oo aad u dhib badan jawaabayaasha waxqabadka badan. Raadinta iyo Samatabbixinta Dhacdada Musiibada ah waxaa soo diyaariyay Guddiga Goobidda iyo Samatabbixinta Qaranka (NSARC) si ay u bixiyaan hagitaan cad, qeexan, jihaysan iyo macluumaad ku saabsan goobidda iyo samatabbixinta (SAR) inta lagu jiro musiibooyinka. Waxay ka hadlaysaa abaabulka jawaab celinta federaalka, maareynta shilalka, tixgelinta muhiimka ah, tixgelinta goobaha gaarka ah ee ay abaabuleen nooca musiibada, iyo saameynta masiibooyinka ay dad sameystaan.
'Laqabsiga Cimilada: Xisaabaadka Adkeysiga, Isku Filanaanshaha iyo Isbeddelka Nidaamyada' | ...
Dhibaatada Cimilada iyo Heshiiska Cusub ee Caalamiga ah ee Cagaaran by Noam Chomsky, Robert Pollin: 9781788739856 | ...
Isbeddelka Cimilada: biyo-qabad ama dhammaad-ciyaar Buuggan cusub ee qasabka ah, Noam Chomsky, hoggaamiyaha guud ee bulshada, iyo Robert Pollin, oo ah aqoonyahan caan ku ah horumarka dhaqaalaha, ayaa khariidadeeyay ...
Geesinimo Wadareed Taariikhda Fikirka Dhaqanka iyo Dhaqanka Iskaashatada Afrikaanka Mareykanka
Geesinimada Wadajirka ah, Jessica Gordon Nembhard waxay ku xustay iskaashatooyinka Afrikaanka Mareykanka. Ciyaartoy badan ayaa caan ku ah taariikhda qibrada Afrikaanka Mareykanka: Du Bois, A. Philip Randolph iyo Kaaliyaha Mudanayaasha Walaalaha Car Porters Carring, Nannie Helen Burroughs, Fannie Lou Hamer, Ella Jo Baker, George Schuyler iyo Ururka Iskaashatada Dhallinyarada 'Negroes', Nation of Islam, iyo Xisbiga Black Panther. Ku darista dhaqdhaqaaqa iskaashiga taariikhda Madow waxay keeneysaa dib u soo celinta waayo-aragnimada Afrikaanka Mareykanka, iyadoo la kordhinayo fahamka wakaaladda dhaqaalaha Afrikaanka Mareykanka iyo abaabulka dhaqaalaha aasaasiga ah.
Dhaqdhaqaaqyada Wadajirka ah: Gargaarka Wadajirka ah ee Ka Baxsan Wadajirka
Maaddaama bulshooyinka hanti-wadaagga ah ee qarnigii labaatanaad ay ka gudbeen dhibaatada una gudbeen xiisad, dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee Waqooyiga adduunka ayaa xoogaa la xayiray (in kasta oo muuqaalka muuqaalka ah sida Occupy), ay la soo gudboonaatay baahida degdegga ah ee lagu horumarinayo kaabayaasha abaabul ee u diyaarin kara dhulka dhabta ah , oo waara, badal. Inbadan iyo in ka badan, baahida loo qabo in la horumariyo ilaha kaabayaasha dhaqaalaha ee la wadaago - waxa Shantz loo yaqaan "kaabayaasha iska caabinta" - ayaa muuqanaya. Musiibada deegaanka (iyada oo loo marayo dhibaatooyinka caasimada), dhibaatooyinka dhaqaale, ciriiriga siyaasadeed, iyo cabsida ballaaran ee la soo saaray iyo cuqdad ayaa dhammaantood u baahan diyaarin urureed - dhismaha guud ee beddelka adduunka dhabta ah.
Bulshooyinka Musiibada: Falanqaynta cilmiga bulshada ee xaaladaha culeyska wadareed
Waxay baareysaa waxa cilmi baarista cilmiga bulshada ay ka ogaatay ilaa iyo hada shaqsiyan iyo jawaabta bulshada ee culeyska wadajirka ah, oo udhaxeeya masiibooyinka dabiiciga ah sida daadadka iyo dhulgariirrada ilaa kuwa bani-aadamka sameeya sida qarxinta atomiga ama dilka Madaxweynaha, oo ay kujirto culeysyo muddo dheer taagnaa sida niyad jab ama saboolnimo daba dheeraatay.
Corona, Cimilada, Gurmad Degdeg ah: Wada-hadallada Dagaal ee Qarnigii Labaatanaad
Muxuu COVID 19 inooga sheegayaa burburka cimilada, maxaanse ka qaban karnaa?
Coronavirus, Fasalka iyo Mutual Aid ee Boqortooyada Ingiriiska
Buuggan wuxuu tixgelinayaa sida jawaabta dowladda UK ee ugu dambeysay ee faafa ee faafinaysa faa iidada u leedahay fasalka shaqeeya, iyo sida gargaarka labada dhinac ah, oo salka ku haya mabaadi'da fowdada, loogu adeegsan karo xoog ...
Cilmigaani wuxuu sahaminayaa "dareenka xorriyadda hawada," sida hal xabbad u dhigay, adoo fiirinaya tusaalooyinka casriga ah ee ismaamulka, meelaha tooska ah ee dimoqraadiyadda iyo dhibaatooyinka adduunka dhabta ah ee ...
Dib-u-cusboonaysiinta Dimuqraadiga iyo Dhaxalka Dhinacyada Gargaarka Labada Qof ee Meksiko Mareykan ah
Dhaxalka taakuleynta taariikheed ee taariikhiga ah ee ay abaabuleen dadka reer Mexico ee Mareykanka, iyadoo xoogga la saarayo is-caawinta iyo wadajirka bulshada, waxay sii waddaa inay ku wargeliso dhaqdhaqaaqa reer Mexico ee Mareykanka iyo inay si xeeladeysan saameyn ugu yeelato tiro ...
Musiibada iyo Caabiga
"Muddo sanado ah hadda Seth Tobocman wuxuu la wareegayaa awoodaha inaga oo dhan ah. Isaguna gaabin maayo - hubi waxa ku jira muggan." —Harvey Pekar, majaajiliste guru, ...
Musiibo ku timaadda doorashada: Sida ficilladdeennu ay khataraha dabiiciga ah ugu beddelaan masiibooyin
Dhulgariir ayaa burburiyey Haiti iyo duufaan goos goos ah oo ka dhacday Texas. Waxaan maqalnaa in dabeecadda ay si baahsan u socoto, oo ay doonayso inay naga baabi'iso 'aafooyinka dabiiciga ah' Sayniska ayaa ka sheekeeya sheeko ka duwan tii hore, si kastaba ha noqotee: masiibooyinku ma aha kuwa ka dhasha sababaha dabiiciga ah; waa natiijada ka dhalata xulashada iyo go'aannada aadanaha. waxaan nafteena galinay dhibaato; Waxaan ku guuldareysaneynaa inaan qaadno talaabooyin aan ognahay inay ka hortagi doonaan musiibooyinka, iyadoo aan loo eegin waxa uu deegaanku sameeyo.
Raasamaal Masiibooyin: Dil Dilasho Masiibo
Musiibada waxay noqotay ganacsi weyn. Saxafiga ugu iibka badan Antony Loewenstein wuxuu socdaalo ku maraa Afghanistan, Pakistan, Haiti, Papua New Guinea, Mareykanka, Britain, Griiga, iyo Australia si uu u arko xaqiiqda dhabta ah ee hanti-wadaagga musiibada. Wuxuu ogaadaa sida shirkaduhu lacag ugu shubaan si xun u abaabulan adduun qarsoon oo ka mid ah xarumaha dadka lagu hayo, amaanka millatariga ee gaarka loo leeyahay, abaabulka gargaarka, iyo macdan qodista.
Jaamacadda Illinois Press
Jinsiyadda Musiibada: Badbaadinta, Wadajirka, iyo Awooda Xilliga Horumarka
Qarni ka hor, dowlado ay dhiseen Horusocod-Ero-aaminaada ayaa bilaabay inay qaataan mas'uuliyad weyn oo ku saabsan ilaalinta iyo badbaadinta muwaadiniinta. Hadana ka dib laba masiibo oo ku taal xudduudda Mareykanka - Canada - Salem Fire ee 1914 iyo Qarxiga Halifax ee 1917 - waxay arkeen badbaadayaal fasalka ka shaqeynaya halkii ay u rogi lahaayeen saaxiibadood, deriskaaga, dadka aad wada shaqeysaan, iyo xubnaha qoyska ee caawinta iyo gargaarka.
Musiibooyinka iyo Caafimaadka Maskaxda: Mabaadi'da daweynta ee laga soo qaatay Daraasaadka Musiibada
Maxay masiibooyinka baaxadda weyn u soo saaraan xaalado maskaxiyan caafimaad qaba oo kale? Maxay yihiin mabaadi'da daweynta ee aan ka dheefsan karno daraasad ku saabsan isbeddelada aadanaha ee dabiiciga ah ee ka dhex dhaca kuwa ka badbaaday musiibada?
Aafooyinka iyo Soo-celinta Bulshada: Wax ka qabashada Dhibaatooyinka u dhexeeya Gobolka iyo Bulshada
Bulshooyin badan oo ku nool Mareykanka ayaa gobolku ka tegey. Maxaa dhacaya markii masiibooyinka dabiiciga ahi ku sii darsadaan dhibaatadooda? Buuggan wuxuu eegaa xiriirka u jabay dowladda federaalka iyo bulshada rayidka xilliyada dhibaatooyinka. Gargaarka is-kaashatada ayaa helay ahmiyad cusbooneysiin ah bixinta gargaarka markii duufaannada, daadadka iyo masiibooyinka ay ku dhuftaan, iyadoo dhimista qarashyada dowladdu ay culeys weyn ku keentay bulshooyinka halganka ugu jira inay noolaadaan. Dib ugu noqoshada barnaamijyada samafalka ee iskood isu abaabulay ee Xisbiga Black Panther, dhaqdhaqaaqyo bulsheed oo xagjir ah oo ka socda Occupy ilaa Black Lives Matter ayaa dhisaya shabakado gargaar oo iskiis ah oo gudaha iyo ka soo horjeedka gobolka. Si kastaba ha noqotee, maaddaama mas'uuliyadda federaalka ee gargaarka la qaaday, gargaarka labada dhinac waxaa soo food saaray dhibaato qoto dheer: dadka caadiga ah miyay ku lug yeeshaan ka faa'iideysigooda?
Jaamacadda Texas Press
Barakacay: Nolosha Qurbajoogta Katrina
Xisaabtan dhaqameed ee duufaanta Katrina ee ka badbaaday dib-u-dhiska noloshooda ee ka fog Xeebta Gacanka waxay daah-fureysaa Katrina Bookshelf, buugaag taxane ah oo cusub oo baari doona cawaaqibka muddada-dheer ee aafada dabiiciga ee ugu xun Mareykanka.
Ha uga tegin Asxaabtaada gadaal: Dariiqooyin Muhiim ah oo lagu Taageero Qoysaska Dhaqdhaqaaqa iyo Caddaaladda Bulshada
Ha U Dhigin Asxaabtaada gadaal waa ururinta talooyin la taaban karo, talooyin, iyo sheekooyin ku saabsan siyaabaha ay waalidiinta aan waalidku u taageeri karin waalidiinta, carruurta, iyo daryeelayaasha bulshada ay ka tirsan yihiin, dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo habab wadareed. Ha uga tegin saaxiibadaa gadaal inay diiradda saaraan arrimaha saameeya carruurta iyo daryeelayaasha iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka ballaadhan ee caddaaladda bulshada, is-caawinta, iyo xoraynta wadajirka ah.
Dhaqanka Eco: Musiibo, sheeko, hadal
Uruurinta tifaftirka, Dhaqanka Eco: Musiibo, sheeko, hadal, wuxuu furayaa wadahadal ku saabsan xiriirka dhexdhexaadinta ee ka dhexeeya dhaqanka iyo bey'ada. Dhaqdhaqaaqa ka dhexeeya labadan xoogood oo waaweyn ayaa soo galaya gargaar aad u daran markii masiibo — qaababkeeda iyo sheekooyinkeedaba - ay muujiso jilicsanaanta dhulkeenna deegaan iyo dhaqan.
Magaalooyinka Ba'an: Khatarta iyo Balanqaadka Nolosha Magaalooyinka ee Da'da Isbedelka Cimilada
Sahaminta goynta sida magaalooyinku u wadaan isbeddelka cimilada iyadoo ay ku jiraan safka hore ee dhibaatada cimilada soo socota
Qoraalada Goobta ee Musiibada
Qoraallada 'Field Field' ee deegaanka ee 'Elie Kol Kol' ee masiibada ka timid markii ugu horreysay waxaa laga soo saaray dhul-gariir, Abaalmarintii Qaranka ee Abaalmarinta Abaalmarinta saddexda qaybood ee The New Yorker. Waxay ku sii ballaadhisay buug kooban oo haddana si qani ah loo baaray ugana xumaaday buugga ku saabsan isbeddelka cimilada: hordhaca caqabadda ugu weyn ee maanta adduunka ka taagan
Dabka Jannada: Musiibo Mareykan ah
Majiraan wax horey ujiray taariikhda Mareykanka kadib burburinta magaalada Janada, Kaliforniya. Bishii Nofeembar 8, 2018, bulshada ka kooban 27,000 ee qof ayaa liqay Dabkii xumaa ee Camp Fire, oo baabi'iyay ku dhowaad guri kasta oo dilay ugu yaraan 85 qof.
Taariikhda Dadweynaha ee abaabulka bulshada ee New Orleans sannadihii ka hor iyo ka dib Katrina.
Loogu Talagalay Dadka oo dhan: Soo bandhigida Taariikhda Qarsoon ee Iskaashiga, Dhaqdhaqaaqa Iskaashiga, iyo Wada-noolaanshaha Mareykanka
Daabacaadda Cagaaran ee Chelsea
Laga Soo Bilaabo Maxay Tahay Maxaa Ka Jira Haddii: Daahfurka Awooda Khiyaaliga ah ee Abuurista Mustaqbalka Waxaan Rabnaa
Waqtiyadan kala qaybsanaanta qotada dheer iyo quusta qotada dheer, haddii ay jirto wax la isku raacsan yahay oo ku saabsan wax kasta oo adduunka ka jira, waa in mustaqbalku noqon doono mid xun. Waxaa jira cudur faafa oo kalinimo ah, cudur faafa oo walaac leh, dhibaato caafimaad maskaxeed oo aad u tiro badan, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa kor u kacay dhaq dhaqaaqyada xagjirnimada iyo dowladaha. Isbadalka cimilada ee musiibada. Khasaaraha kala duwanaanshaha noolaha. Cunto yarida. Jajabinta nidaamka deegaanka iyo bulshooyinka ka baxsan, waxay umuuqataa, dayactir. Mustaqbalka - in aan la dhaho waqtiga xaadirka ah - waxay umuuqataa mid xun.
Javier Sethness-Castro wuxuu soo bandhigayaa warka murugada leh ee khubarada cilmiga cimilada casriga ah iyadoo la siinayo aragti dib-u-dhis ah oo ay dhiirrigelinayaan dhaqammada aqooneed ee fowdada iyo dhiirrigelinta fikirka muhiimka ah sida ...
Degganaan: Tilmaamaha loogu talagalay madax-bannaanida
Waxaan u dhiseynaa barxad madax-bannaanida kacaanka. Isbedelka cimilada iyo burburka dhaqaale, waxaan isku xireynaa shabakad dad ah oo diyaar u ah inay noolaadaan oo la dagaallamaan, xirfadaha isu geynta, dhisida ...
Casharrada laga qaado Mawjadda Koowaad: Adkaysiga da'da COVID-19
Casharrada laga helayo Mawjadda Koowaad: Adkaysiga da'da COVID-19, waxaa ku jira 25 daraasado kiis, wareysiyo ah, iyo sida loo hagayo ah oo muujinaya qaar ka mid ah jawaabaha ugu wax ku oolka badan ee ay hoggaamineyso bulshada ee dhibaatadan caalamiga ah.
Ku noolaanshaha Dhinacyada Raasamaalka
Laga soo bilaabo horumarkii ugu horreeyay ee gobollada, kooxo dad ah ayaa baxsaday ama la masaafuriyey. Markay hantigoosadku horumarayeen, dadku waxay isku dayeen inay ka baxsadaan caqabadaha hanti-goosad ee ku xiran xukunka gobolka. Tani awood badan ...
Isweydaarsiga labada dhinac: Xaqiiqada isbedelka
Gargaarka Labada Dhinac: Xaqiiqada Evolution waa ururinta qormada 1902 ee qoraaga dabiiciga ah ee Ruushka iyo falsafad-doonka Peter Kropotkin. Qormooyinka, oo markii hore lagu daabacay joornaalka Ingiriisiga ah ee qarnigii sagaal iyo tobnaad inta u dhaxaysa 1890 iyo 1896, waxay sahamiyaan doorka iskaashi waxtar leh iyo is-afgarad (ama "kaalmo wadaagga") boqortooyada xayawaanka iyo mujtamaca bini aadamka labadaba waqtiyadii hore iyo kan hadda.
Gargaarka Wadajirka ah: Isir Iftiin u ah Evolution
Boqol sano kadib dhimashadiisa, Peter Kropotkin wali wuxuu kamid yahay shakhsiyaadka ugu dhiirigalinta badan ee dhaqdhaqaaqa fowdada. Inta badan waa la iloobaa in Kropotkin uu sidoo kale ahaa joqoraafi caan ah oo adduunka oo dhan caan ku ah oo dhaleeceyntiisa salka ku haya fikirka tartanka ee ay dhiirrigeliso Darwinimada Bulshada ayaa gacan ka gaysatay isbeddelka aragtida casriga casriga ah. Wuxuu ahaa qof jecel Darwin, wuxuu u adeegsaday u kuur-galkiisa nolosha Siberia inuu aasaas u noqdo aruurinta 1902 ee qoraalladiisa Gargaarka Mutual: A Factor of Evolution. Kropotkin wuxuu muujiyey iskaashiga labada dhinacba wax ku oolka ah iyo isu-celinta - shakhsiyaadka iyo jaad ahaan-kaalin aad uga muhiimsan boqortooyada xayawaanka iyo bulshooyinka aadanaha marka loo eego shaqsiyaadka loolanka adag ee tartanka ah. Farriintiisu way caddahay: isgarabsi waa xoog!
Bog kasta oo ka mid ah daabacaaddan cusub ee 'Mutual Aid' waxaa si qurux badan u sharraxay mid ka mid ah fanaaniinta xilligan loogu dabaaldego fowdada, NO Bonzo. Akhristuhu wuxuu sidoo kale ku raaxeysan doonaa farshaxanka asalka ah ee GATS iyo faallooyin xeel dheer oo ay leeyihiin David Graeber, Ruth Kinna, Andrej Grubacic, iyo Allan Antliff.
Mutual Aid by Dean Spade: 9781839762123 | PenguinRandomHouse.com: Buugaag
Gargaarka is-kaashu waa ficil xag-jir ah oo midba midka kale ku daryeelo inta uu ka shaqeynayo bedelidda adduunka. Dunida oo dhan, dadku waxay la kulmaan dhibaatooyin isdaba joog ah oo soo noqnoqda, oo ka yimaada cudurka 'Covid-19' ee safka ...
Saxaafadda Jaamacadda Cornell
Gargaarka Wadajirka ah iyo Cusboonaysiinta Ururka
Hoosudhaca joogtada ah ee xubinimada midowga waxaa guud ahaan loo aaneeyaa jawiga cadaawadeed ee sii kordheysa ee cadaawadeed, sharci, iyo maamul. Samuel B. Bacharach, Peter A. Bamberger, iyo William J. Sonnenstuhl waxay ku doodayaan in hoos u dhacu uu yeelan karo wax badan oo ku saabsan qalalaasaha sharci ee midowga iyo ka go'naanshaha xubinta. Waxay kaloo soo jeedinayaan in labada mushkiladood wax laga qaban karo haddii ururada shaqaaluhu ay ku noqdaan qarnigii sagaalaad, xididdada is caawiya ee wadaagga ah. Qorayaashu waxay ku doodeen in dhaqdhaqaaqa shaqaaluhu uu yahay mid lagu garto laba nooc oo xiriirka xubnaha-ururka ah: caqliga is-caawinta iyo caqli-celinta adeegga. Kii ugu horreeyay wuxuu ku badnaa maalmaha hore wuxuuna dhiirrigeliyay dareenka bulshada dhexdeeda xubnaha ka shaqeynayay inay is taageeraan. Qarnigii labaatanaad, waxaa badanaaba lagu badalay qaabka adeega, kaas oo wax yar ka weydiiya xubnaha, kuwaas oo daacad u ah kaliya haddii hogaamiyeyaashooda ay keenaan mushahar kordhin iyo faa'iidooyin. Dib-u-soocelinta sharci ahaaneed iyo xoojinta ballanqaadka xubinta ayaa dhici kara oo keliya, ayay qorayaashu ku andacoodeen, haddii caqli-celinta is-caawinta la oggolaado inay soo noqoto.
Gargaar Wada Jir ah, Dhibaato & adkeysi
Halka raasamaalka iyo awoodda dowladdu ay riixayaan neoliberal, go'doominta fikradda is-daryeelidda, waxaan ku doodi doonnaa wadajir, adkeysi shucuur. Waxaan la dagaalami karnaa jahwareerkeena isla waqtigaas sida aan ula dagaalanno dulmiga. Muggan yar wuxuu bilaabayaa wadahadalka sida.
Tani waa kheyraad loogu talagalay hagidda hababka ugu wanaagsan ee looga jawaabayo dhaawacyada muddada-dhow iyo muddada-dheer. Waxaan ka fikirnaa dhaqamadan inay yihiin qalab lagu dhisayo u adkeysiga shucuureed shakhsiyaadka iyo bulshada labadaba.
No Heroes More
Saxafiga ku guuleystey abaalmarinta Jordan Flaherty wuxuu na keenayaa gudaha mugdiga iyo maskaxda qalloocan ee badbaadiyaha. Caqli badan oo aan naxariis lahayn, Halyeeyo Dheeraad ah waa aalad aan looga maarmin caddaaladda bulshada ...
Dabka: Kiiska (Gubashada) Heshiiska Cusub ee Cagaaran
In ka badan toban sano, Naomi Klein waxay diiwaangelisay dhaqdhaqaaqa dhibaatada cimilada laga soo bilaabo khatar mustaqbalka ilaa xaalad deg deg ah oo gubta. Waxay ka mid ahayd kuwii ugu horreeyay ee sameeya kiiska waxa loogu magac daray 'New New Deal' - oo ah himilo loogu beddelo dhaqaalaheena si loola dagaallamo burburka cimilada iyo isla-takoor la'aanta waqti isku mid ah. Waqtigayaga badaha soo kacaya iyo nacaybka sii kordhaya
Waqtiyada qalalaasaha, marka xarumaha awoodeed la muujiyo, dadku waxay isu rogaan midba midka kale. Wadajirka Dhibaatada Faafa wuxuu ururiyaa khibradaha ugu horeeya ee ka ...
Waddooyinka loo maro Utopia: Sahaminta Sawirka ee Anarchism Maalin kasta
Waxay kakooban tahay toban sawir-wadaag ah oo iskudhaf ah oo kudhagan ereyada Cindy Milstein ee ereyada Erik Ruin ee kudhisan waraaqaha iyo xoqida sawirada Erik Ruin, Wadooyinka loo maro Utopia waxay soo jeedinayaan qaar ka mid ah halkan-iyo-imminka dhaqamooyinka muujiya, sikastaba ha ahaatee, is urur caadi ka noqon kara bulshada sinnaanta. Buuggu wuxuu miinshaariyaa waxa aan ku qabanno nolol maalmeedkeenna jawharad hore u jiray oo mustaqbal xorriyad leh-oo ku dhisan anshax-darrada dowladnimo sida iskaashiga iyo dimuqraadiyadda tooska ah. Wadooyinka loo maro Utopia maahan socod indho-indheyn leh, in kastoo. Buuggu wuxuu hayaa xiisadihii ka taagnaa isku dayga maanta ee ah "tusaalaynta" hay'adaha jiifka ah iyo cilaaqaadka iskaashiga ka dhexeeya iyadoo ay sii kordhayaan xaaladaha taagan, dhiig-miirashada, iyo shisheeyaha.
Mashruuca Sheekada Sawirka
The Post Katrina Sawirro: Waxaa Qoray & Waxa Qariyey Boqolaal
Waxaad gacantaada ku haysaa anthology badbaado, cusbooneysiin iyo halgan, jir suugaaneed baaxad leh oo ay si wada jir ah uga sheekeeyeen kuwa saameeyey dhulgariirkii iyo duufaannadii Hurricanes Katrina iyo Rita, kuwa qaaday talaabooyinka kuwa ka badbaaday iyo soo celinta dadkii baxsaday iyo kuwii baxsaday iyo kuwa waxay u yimaadeen dhulkii ay musiibada ku habsatay iyagoo raadinaya maciishadeed.
Soo Saarida Musiibada iyo Soo kabashada Dhulgariir Haiti Ka Dib: Dhisme warshadeed Musiibo
Musiibada dabiiciga ah muddo fog ayaa loo arkaa inay yihiin dhacdooyin si dabiici ah u dhashay, laakiin sida sayniska, tikniyoolajiyadda, iyo aqoonta bulshada ee aafooyinka ayaa noqotay mid sii fududaanaysa, qaybta ay dadka iyo nidaamyadu ku ciyaaraan dhacdooyinka musiibada ayaa si muuqata u sii muuqda. Soo Saarashada Musiibada iyo Soo kabashada Dhulgariir Haiti-kadib Haiti wuxuu muujiyaa sida howlaha bulshada ay u saameeyaan musiibooyinka sida ay wax u socdaan, iyada oo loo marayo qeybinta awoodda iyo ilaha, isticmaalka khudbadaha iyo sawirada masiibada, iyo nidaamyada dhaqaalaha iyo bulshada iyo xiriirka taas oo hoos u dhigeysa bulshooyinka ay saameeyeen.
Puerto Rico oo aan ku noolahay
Puerto Rico en mi corazón Gabay. Daraasadaha Latinx. Daraasadaha LGBTQIA. Bilooyinkii ku xigay duufaantii Maria ee marinka Puerto Rico, gabayaaga Puerto Rican, turjubaano, farshaxanleyda buugaagta, & ...
Puerto Rico Strong: A Comics Anthology Cilmiga Ruef Ruef iyo Soo kabashada
Puerto Rico Strong waa natiijada dad badan oo isu soo baxay si naxariis darro ah dhibaatadii ka dhacday jasiiradda kadib Hurricane Maria. Inbadan oo ka mid ah bulshada Latinx waxay u dhaqaaqeen sidii ay ula wadaagi lahaayeen sheekooyinkooda, labadaba khayaal iyo shaqsi ahaanba, ee kahadlay dhaqanka, taariikhda, iyo awooda bulshada Puerto Rican.
Ku-qanacsanaanta Bulshooyinka Aadanaha: Laga soo bilaabo Waqtiyadii hore ilaa Dawladdii Daryeelka Casriga ah
Soo bandhigida fikrado cusub oo ku saabsan isdhaafsiga, buugani wuxuu isku daraa aragtida hadiyadeed ee caanka ah ee Marcel Mauss iyo fikradda Barrington Moore ee waajibaadka labada dhinac ee isku xiraya taliyayaasha iyo kuwa la xukumo. Iyaga oo ka careysiinaya isku xirnaanshaha qaababkan, Reciprocity in Human Societies waxay soo jeedineysaa in cilmu-nafsiga isbeddelka uu muujinayo u janjeersiga aadanaha ee isu-celinta iyo iskaashiga.
Ka soo kabashada Sinnaan la'aanta: Duufaantii Katrina, Dhulgariirkii San Francisco ee 1906, iyo Dhibaatadii Musiibada
Daraasaddan isbarbardhiga ah ee natiijooyinka ka soo kabashada ee laba ka mid ah masiibooyinkii magaalooyin ee ugu ba'anaa ee taariikhda Mareykanka ayaa banaanka soo dhigaya sinnaan la'aanta bulsheed ee ku jirta isir ahaan loo abaabulay, dhaqaalaha ku saleysan caasimada.
Magaalooyinka Wadaagidda: Dhaqdhaqaaqa Magaalooyinka La wadaago - La wadaagi karo
"Wadaagista Magaalooyinka: Hawlgalinta Wadaagga Magaalada" waxay soo bandhigaysaa in ka badan boqol daraasadood oo la xiriira wadaagis la xiriira iyo siyaasado tusaale ah oo ka socda in ka badan 80 magaalo.
Wadaagista Dhaqaalaha xilliyada Dhibaatada: Dhaqanka, Siyaasadda, iyo Fursadaha
'Dhaqaalaha wadaagga cusub' waa ifafaale ku sii kordhaya guud ahaan Waqooyiga Adduunka. Waxay sheeganeysaa inay beddeleyso cilaaqaadka wax soo saarka iyo isticmaalka qaab hagaajin kara nolosheena, yareyn kara saameynta deegaanka, iyo yareynta qiimaha nolosha. Iyada oo lagu jiro dhibaatooyin kala duwan oo xagga dhaqaalaha, deegaanka ah, iyo dhibaatooyin kale ah, farriintani waxay leedahay reson xoogan. Hase yeeshe, ma ahan muran la'aan, waxaana jiray doodo kulul oo ku saabsan cabirka taban ee shaqaalaha iyo macaamiisha si isku mid ah. Buuggan wuxuu ku fidsan yahay meel ka durugsan dhaqaalaha wadaagga maaddaama si caan ah loo qeexay, wuxuuna baarayaa isgoysyada qalafsan ee 'wadaagista' iyo 'dhaqaalaha', iyo sida faham wanaagsan ee xiriirradan ay nooga caawin karto inaan wax ka qabanno dhibaatooyinka badan ee la soo dersa bulshooyinka casriga ah.
Kusoo Biirid Rabitaan
Panthers Black wuxuu istaagaa New Orleans Orissa Arend Abriil 2009 Waxaa laga heli karaa: Xaashi: $ 19.95 (978-1-55728-933-9) Dharka: $ 29.95 (978-1-55728-896-7)
Xadhiga: sheekooyinka ka yimid cadaawad, caabin jacayl
Qofkasta oo raba inuu noqdo mid firfircoon firfircoon iska caabin ah ama dareemaya culeys ama rajo beel, Shut It Down waxay bixisaa istiraatiijiyado iyo ficillo aad hadda qaadi karto si aad u dhiirrigeliso caddaaladda una kiciso is-beddel bulshadaada.
Dunida Cadhaysan: Musiibo ku timaadda Aragtida Dadweynaha
Dunida Cadhaysan waxay baareysaa sida dhaqamada kala duwan ee daqiiqado taariikhi ah oo kaladuwan uga jawaabeen masiibo, iyagoo siinaya aragti ku saabsan xiriirka qalafsan ee ka dhexeeya bulshooyinka iyo deegaanadooda
Manifesto Daryeelka Siyaasadda isku tiirsanaanta
Waxaan ku dhex jirnaa dhibaato caalami ah oo daryeel. Sideen uga baxnaa? Manifesto-ka Daryeelka wuxuu daryeelayaa udub-dhexaadka doodaha dhibaatadeenna taagan: laga bilaabo daryeelka dhow - daryeelka carruurta, daryeelka caafimaadka, daryeelka waayeelka - si loo daryeelo dunida dabiiciga ah. Waxaan ku noolnahay adduun ay taxaddar la'aan ka taliso, laakiin maahan inay sidan ahaato.
Buugga 'Conquest of Bread', Kropotkin wuxuu farta ku fiiqay waxa uu u arko inay yihiin cilladaha nidaamyada dhaqaale ee feudalism iyo hanti-wadaagga iyo sababta uu u aaminsan yahay inay ku barwaaqoobayaan una ilaalinayaan saboolnimada iyo yaraanta. Wuxuu sii wadaa inuu soo jeediyo nidaam dhaqaale oo baahsan oo ku saleysan is caawinta iyo iskaashiga iskaa wax u qabso ah, isagoo caddeeyay in u janjeera ururkan noocan oo kale ah horeyba u jiray, horumar iyo bulsho ahaanba.
Shilka Corona: Sidee Aafadu u Beddeli doontaa Hanti-wadaagga
Suuqa xorta ah, hanti-wadaaga tartanku wuu dhintay. Kala fogaanshaha siyaasadda iyo dhaqaalaha lama sii wadi karo. Shilkii 'Corona Crash', haweeneyda hogaamisa falanqeeyaha dhaqaalaha Grace Blakeley waxay kahadlaysaa isbedellada isbadalada waayi ee coronavirus ku keenayo baraaruga.
Burburkii duufaantii Katrina ka dib, New Orleans waxay noqotay eber eber loogu talagalay dib u soo celinta magaalada Mareykanka, iyada oo qorsheeyeyaasha magaalooyinka, jilaayaasha filimka, fowdada, iyo siyaasiyiinta dhammaantood ay horumarinayaan ...
Hologram: Feminist, Caafimaadka Faca-ilaa-Faca ee Mustaqbalka Cudurka Faafa
Xilliga ay hanti-wadaagga dad badani uga tagayso inay silcaan oo ay dhintaan, oo leh 'is-daryeelid' neoliberal ah oo wax yar ka badan bandaid, sideen caafimaad iyo daryeel ugu soo celin karnaa gacmaheenna? Hologram-ka, Cassie Thornton wuxuu soo bandhigayaa aragti geesinimo leh oo ku saabsan daryeelka kacaanka: shabakadda caafimaadka dumarka ee fayraska ah, ee ay isku filka yihiin.
Bulshada aan Suurtagal ahayn: Xaqiijinta Anarchism -ka Shuuciga ah
Bulshada aan Suurtagal ahayn waxay la kulmaysaa daqiiqad xasaasi ah marka masiibooyinka bulsheed iyo kuwa deegaanku ay dhacaan, Bidixdu waxay u muuqataa inaysan awoodin inay sheegto jawaab, Xuquuqduna waxay xakameysaa doodaha dadweynaha. Buuggani wuxuu bixiyaa dib -u -habayn cusub oo aad loo akhrin karo oo ah aragti -bulsheedka iyo siyaasadda anarchist si loo horumariyo xal -wadaagga anshaxa.
Socdaalka Weyn ee Xiga: Quruxda iyo Argagaxa Nolosha Dhaqaaqa
Saxafiga ku guuleysta abaalmarinta wuxuu sare u qaadaa fikradaheena qarniyada badan ee ku saabsan socdaalka iyada oo loo marayo sayniska, taariikhda, iyo soo gudbinta - saadaalinta awoodiisa badbaadinta ee wajahaya isbedelka cimilada.
Magaalada Adkaysiga leh: Sidee magaalooyinka casriga ahi uga soo kabtaan masiibada
Sannadkii 1871, magaalada Chicago waxaa gebi ahaanba baabi'iyey wixii ku caanbaxay Dabka Weyn. Soddon iyo shan sano kadib, San Francisco waxay jiifsatay burburka qiiqa ka dib dhulgariirkii musiibada ahaa ee 1906. Ama ka fikir qadiyada Qudus, oo ah goobta ugu weyn ee burburka iyo cusbooneysiinta taariikhda, taas oo, in ka badan seddex kun oo sano, ay soo mareen dagaallo, dhul gariir, dabka, labaatan sieg, siddeed iyo toban dib-u-dhis, iyo ugu yaraan kow iyo toban kala-guur oo ka imanaya mid diimeed oo mid kale u beddela.
Buugga Jawaabta: Dhisidda u adkaysiga wadajirka ah ee Kicinta Musiibada
Ebook bilaash ah oo sahaminaya dhibaatada jirta ee isbeddelka cimilada iyo dhaqdhaqaaqa 'u adkaysiga wadajirka ah' ee soo kacaya si loola kulmo caqabadda.
Kacaanka lama maalgelin doono: Waxaa kabaxsan Dhismaha Warshadaha Aan-Fududayn
Degdeg iyo aragti fog, Kacaanka lama maalgelin doono wuxuu soo bandhigayaa dhaleeceyn qiiro leh doorka aamusnaanta ee xasilloonida badan ee ay warshadaha aan faa'ido doonka ahi ka ciyaaraan maareynta diidmada.
Casharka naxdinta leh: Kordhinta masiibooyinka masiibada
Dortrine 'The Shock Doctrine', Naomi Klein waxay ka sheekaynaysaa khuraafaadka ah in suuqa xorta ah ee adduunka uu si dimuqraadi ah uga adkaaday. Daahfurka fikirka, wadada lacagta iyo xarkaha pupp-ka ah ee ka danbeeya qalalaasaha adduunka ka socda iyo dagaalladii afartii sano ee la soo dhaafay, The Shock Doctrine waa sheeko xiise leh oo ku saabsan sida siyaasadaha "suuqa xorta ah" ee Mareykanka ay ugu soo bexeen adduunka - iyada oo loo marayo ka faa’iideysiga dadka ay musiibada ku dhacday iyo wadamada.
Isku-darka xoogga leh ee xisaabaadka aragtida hore iyo cilmi baaris asal ah
Buug, filim iyo mashruuc ku lug leh oo ku saabsan sababta xiisadda cimilada ay u tahay fursadda ugu wanaagsan ee aan waligeen u helnay in aan dhisno adduun ka wanaagsan.
Laba iyo toban Kooxda Buugga Hachette
Qabiil: Ku Yimid Hoyga iyo Lahaanshaha
Marka la isku daro taariikhda, cilmu-nafsiga, iyo cilmu-nafsiga, QABIILKA wuxuu baaraya waxa aan ka baran karno bulshooyinka qabaa'ilka ee ku saabsan daacadnimada, lahaanshaha, iyo raadinta aadanaha weligeed ah ee macnaha. Waxay sharraxaysaa qallafsanaanta-in halyeeyo badan iyo sidoo kale dagaallada sokeeye ay dareemayaan inay ka fiican yihiin nabadda, dhibaatadu waxay u noqon kartaa barako, aafooyinkana mararka qaarkood waxaa lagu xusuustaa si ka xiiso badan aroosyada ama fasaxa kuleylaha.
Codad ka yimid Puerto Rico: Duufaantii Daba-galisay Maria waxay isu keentaa qoraalo ka imanaya labaatan iyo laba jasiiradood - hawl-wadeenno, farshaxanno, iyo abaabulayaasha bulshada - kuwaas oo sharaxaya burburka iyo xaaladaha ...
Kaniisada Katooliga ee St. Augustine ayaa istaagtay Trem? qaybta New Orleans muddo ka badan 170 sano. Caannimadeeda caalamiga ah iyo kaalinteeda xarun muusiko iyo dhaqameed iyo sidoo kale diirada ruuxiga ah ayaa sameysay ...
Nala Dhaqaaqi Doonin: Dib-u-Dhiska Guriga ee Kicitaankii Katrina
Maaddaama daadadka daadadku socdeen toddobaadyadii ka dambeeyay duufaantii Katrina, dadka deggan New Orleans waxay u yimaadeen xaqiijin adag Magaaladoodu waxay ku dhowdahay inay qaado dib u soo kabashada ugu weyn ee taariikhda Mareykanka, hase yeeshee waxay la kulmeen faaruq hoggaamineed oo qoto dheer: xubnaha heer kasta oo dowlad ah, min heer degmo illaa heer federaal, waxay ku dhaceen shaqada. Nala Dhaqaajin Mayno waxay ka sheekeynaysaa sheekada soo jiidashada leh ee hoggaamiyeyaasha bulshada ee u soo kacay gurigan banaan si ay dib ugu dhisaan magaaladii ay jeclaayeen.
Waxyaabaha hoosta ku yaalla
Bishii Ogosto 2005, kumanaan kun oo ka mid ah dadka degan New Orleans-oo aad u liita, oo u badan dad midab leh, madowna u badan yahay-ayaa loo daayey inay la kulmaan mid ka mid ah musiibooyinkii “dabiiciga” ee ugu xumaa taariikhda Mareykanka ee ...
Markay Cirka Duntay: Duufaantii Maria iyo Mareykanka ee Puerto Rico (Hardcover) | McNally ...
Baadhitaan ba'an oo ku saabsan waxyaabihii burburiyey Puerto Rico ka dib duufaantii Maria, oo ka timid wariye caan ah oo la yiraahdo Michael Deibert. Markay Duufaantii Maria ka ciyey Puerto oo dhan ...